Spotify သည် 'Spotify Singles' Playlist ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် DPA သို့ပြောင်းသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Spotify သည် 'Spotify Singles' Playlist ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် DPA သို့ပြောင်းသည်
ခဲထုတ်လုပ်သူဝီလျံ Garrett အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်မှီခို Crystal Clear ကရိယာ
New York, မေ 20, 2020 ဗီနိုင်း၊ ကက်ဆက်နှင့်စီဒီကလပ်များ၏ခေတ်ကိုပြန်လည်မှတ်မိစေသည့်ထူးခြားသည့်“ Spotify Singles” သီချင်းစာရင်းသည်ယနေ့အလုပ်၏အိမ်မှပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အကောင်းဆုံး streaming ဂီတစုဆောင်းမှုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စတင်စုဆောင်းခဲ့သောအချိန်ကတည်းကသီချင်းပေါင်း ၆၀၀ ကျော်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် Spotify သုံးစွဲသူသုံးဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့သည်။ Spotify ၏အကြီးတန်းထုတ်လုပ်သူဝီလျံ Garrett သည်ပြဇာတ်စာရင်းကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ရောစပ်ခြင်းကိုကြီးကြပ်သည်။ ၎င်းတွင်အနုပညာရှင်တစ် ဦး ချင်းမှသီချင်းနှစ်ပုဒ်ပါဝင်သည်။ တ ဦး တည်းမူရင်းလမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ဒုတိယတစ် ဦး အဖုံးဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး Spotify playlist အတွက်စံနမူနာမပါသောအသံများကိုဖမ်းယူရန် Garrett ကအမှီပြုသည် DPA မိုက်ကရိုဖုန်း'' 4099 စာရွက်စာတမ်း နှင့် 4011 Cardioid မိုက်ခရိုဖုန်း.
“ ကျွန်တော် Spotify မှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာ DPA's 4099s နဲ့ 4011s ပေါင်းစပ်ပြီးသား။ ဒါကငါအမှတ်တံဆိပ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်” ဟု Garrett ကရှင်းပြသည်။ သူတို့အသံဘယ်လောက်ရသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းသဘောကျမိပေမယ့် DPA အကြောင်းပိုပြီးလေ့လာချင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါအွန်လိုင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရေငုပ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အသုံးချပရိုဂရမ်တွေနဲ့ high-end သံစုံတီးဝိုင်းအသံဖမ်းကိရိယာတွေမှာအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ငါ DPAs ကိုအချို့သောကိရိယာများ၏ရှေ့တွင်ထားရန်လိုအပ်ပြီးသူတို့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။
Spotify Singles များအတွက်အစိပ်အပိုင်းကိုဖမ်းယူနိုင်ရန် Garrett သည် ၄၀၉၉ Instrument Mic ကိုဖြောင့်မတ်စန္ဒရားတစ်ခုတွင်နေရာချကာ 4099 Cardioid Mics ကို overheads အဖြစ်ထားရှိသည်။ သူက“ ကျနော်တို့ဒီ mics တွေကိုကနောင်းကြိုးနဲ့ acustust ဂစ်တာတွေမှာသုံးခဲ့ကြပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်လှပတဲ့တံပိုးမှုတ်သံကိုကြားခဲ့ကြတာပါ။ DPA ၏ ၄၀၉၉ နှင့် ၄၀၁၁ ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စန္ဒရားတလုံးမှပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာပြီးလက်တွေ့ကျသောအသံကိုရရှိနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် acoustic ဂစ်တာအတွက် Garrett သည်တူညီသည့် DPA 4011s အတွဲများပေါ်တွင်မှီခိုသည်။ သူကဆက်လက်ပြီး“ 4011s တွေကို vintage acoustic ဂစ်တာတွေသုံးပြီးတကယ့်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့စတီရီယိုအသံဖမ်းစက်ကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကဒီဂစ်တာတွေထဲကကျွန်တော်ရယူခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးအသံပဲ” ဟုသူကထပ်ပြောသည်။ “ 4011s နဲ့ 4099s ကို clip-on option နဲ့အတူတစ်ပြိုင်နက်တည်းကြိုးတွေကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းပိတ်ပြီးပိတ်ပစ်ဖို့ option ရှိတာကိုငါကြိုက်တယ်၊ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုလွန်ကာလအတွက်ကြီးမားသောအားသာချက်ဖြစ်သည်။ ”
သူသည် Spotify Singles များကိုမှတ်တမ်းတင်စဉ်တစ်လျှောက် Garrett သည်ဖြစ်လာခဲ့သည် လွန်စွာလိုလားသော DPA မိုက်ခရိုဖုန်း၏ပန်ကာ။ သူက“ DPA မိုက်ကရိုဖုန်းတွေဟာ application တွေကိုအသံသွင်းဖို့အတွက်ငါ့ရဲ့မိုက်ခရိုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လာတယ်။ "ငါသည်မကြာသေးမီက Alicia Keys နှင့်အတူ session တစ်ခုအဘို့အစန္ဒရားပေါ်တွင် 4011s နှင့် 4099s ကိုအသုံးပြု။ , သူတို့အံ့သြဖွယ်တံပိုးမှုတ်သောအခါ။ မတူညီသောမိုက်ခရိုဖုန်းများကြားရှိတသမတ်တည်းဖြစ်မှုသည်အလွန်မြင့်မားသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ DPA ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရမ်း ၀ မ်းသာမိပါတယ်။ အခုတော့သူကအမှတ်တံဆိပ်နဲ့အတူပိတ်မိနေပြီး၊ ကျွန်မရဲ့ရှေ့ဆက်တိုးတက်နေတဲ့စီမံကိန်းအားလုံးမှာသူတို့ကိုဆက်လက်အသုံးပြုသွားမှာပါ။ ”
DPA မိုက်ခရိုဖုန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ် application များအတွက်အရည်အသွေးမြင့် condenser မိုက်ခရိုဖုန်းဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ဒိန်းမတ် Professional ကအသံထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ DPA ရဲ့အန္တိမရည်မှန်းချက်ကအမြဲတိုက်ရိုက်အသံတပ်ဆင်ခြင်း, အသံဖမ်း, ပြဇာတ်ရုံနဲ့ထုတ်လွှင့်တို့ပါဝင်သည်သမျှသောက၎င်း၏စျေးကွက်များအတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောမိုက်ခရိုဖုန်းဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ၎င်း၏ဖောက်သည်များကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမှကြွလာသောအခါ, DPA မျှ shortcuts တွေကိုကြာပါသည်။ မဟုတ်သလိုဒိန်းမတ်အတွက် DPA စက်ရုံမှာပြုထားတဲ့သူ့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ကုမ္ပဏီကစေ့စပ်ညှိနှိုင်းပါဘူး။ ရလဒ်အဖြစ် DPA ၏ထုတ်ကုန်တကမ္ဘာလုံးဟာသူတို့ရဲ့ခြွင်းချက်ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်မြင်သာ, မတူနိုင်တဲ့သတ်မှတ်ချက်များ, အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်, ရှိသမျှအထက်, စင်ကြယ်သော uncolored နှင့် undistorted အသံကချီးကျူးနေကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.dpamicrophones.com.
NUGEN အသံသည် Halo Downmix Update ကိုကြေငြာခဲ့သည် - ဇူလိုင်လ 7, 2020
Pliant Technologies သည် Webinar အသစ်များကိုစတင်မိတ်ဆက်သည် - ဇွန်လ 30, 2020
မာရှယ်အီလက်ထရောနစ် CV346 ကင်မရာများသည် Leading Edge Multimedia အတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော Streaming စွမ်းရည်များကိုဖန်တီးသည် - ဇွန်လ 29, 2020
အသံလွှင်း DPA Microphnes Spotify 2020-05-20
နောက်တစ်ခု: Virtual Operations ပါဝါပထမ ဦး စွာ ၂၄/၇ အခမဲ့လေကြောင်းကင်ညာကလေးကွန်ယက်